Vary fanamainana fampidirana amina fomba fanamorana fampidiran-tseranana
Mitsitsy angovo ao amin'ny varimbazaha fanamainana fampidirana miaraka amin'ny fomba fanafanana fampidirana
Isan-taona i Kazakhstan dia mamokatra voa manodidina ny 17-19 tapitrisa taonina amin'ny lanjany madio, manondrana voany 5 tapitrisa taonina, ary ny salan'isa amin'ny fihinanana ao an-trano dia mahatratra 9-11 tapitrisa taonina. Ny fampandrosoana bebe kokoa ny indostrian'ny voam-bary sy ny fampiroboroboana ny fanondranana varimbazaha dia mitaky fampiroboroboana ny fotodrafitrasa fitehirizana, fitaterana ary fanamainana ny voamaina, ao anatin'izany ny fananganana ny vaovao sy ny fanarenana ireo silo voa taloha, ny fanamboarana ny terminal sy ny fividianana sambo entana maina sy ny mpitatitra varimbazaha. (Baum, 1983). Ilaina ny fanavaozana ny indostria ary ny ezaka dia mitaky ezaka mafy ataon'ny fanjakana sy ny mpamokatra voan-tany.
Ireo mpandray anjara ao amin'ny Astana Kazakh Grain Forum V KAZGRAIN-2012 dia niresaka momba ny toetoetran'ny tsena varimbazaha, ny fironana ary ny fiandrasana ny vidiny, ary koa ny olana sarotra amin'ny lojika sy ny fotodrafitrasa. Voamarika fa 10 taona lasa izay i Kazakhstan dia tsy azo raisina ho mpanondrana voamadinika, fa amin'ny fotoana ankehitriny kosa dia ekena ho laharam-pahamehana ny resaka fanondranana. Ary ny famokarana sy ny fanamainana ny voam-bary dia mitana ny toerana iray lehibe indrindra na eo amin'ny sehatry ny agroindustrial, sy ny toekarena amin'ny ankapobeny.
Ny fanadihadiana ny traikefan'ireo orinasa mpamokatra maro amin'ny fanodinana voamadinika aorian'ny fijinjana dia manaporofo fa ny lahasa voalohany amin'ny fiantohana ny fiarovana sy ny kalitaon'ny voa vao nojinjaina dia ny fanamainany. Ny maha-zava-dehibe ny fanamainana voa dia mihamitombo ny faritra mando: ny fanemorana ny fanamainana na ny fanatanterahana an'io asa io amin'ny fanitsakitsahana ny fanjakan'ny teknolojia dia miteraka fatiantoka amin'ny vokatra. Araka ny fikarohana natao tamin'ny 25-28% hamandoan'ny antontam-bato nandritra ny telo andro dia nihena 20% ny fitsimohany. Ary ny fatiantoka ny maina dia 0.7-1% isan'andro, raha 37% kosa ny hamandoan'ny voan-javatra (Ginzburg, 1973).
Ny zava-dehibe amin'ny fampiasana mahomby ny fanamainana amin'ny fambolena dia ny fanomezana kalitaon'ny voamaina avo kokoa, ny fampitomboana ny fantsom-pifandraisana, ary ny fampidinana ny vidin'ny angovo. Ny fotodrafitrasa hanatsarana ny fahombiazan'ny fanamainana efa misy eo amin'ny fambolena dia ny fiantohana ny fanesorana ny hamandoana ampy sy maharitra amin'ny iray metatra toratelo amin'ny fakantsary fanamainana voa. Ny iray amin'ireo antony misoroka an'izany dia ny singa mangatsiaka, natsangana tao anaty hazo maina, tsy mamorona fepetra tsara indrindra ho an'ny famafazana voamadinika ary hampihena ny habetsaky ny lavaka fanamainana sy ny fanesorana ny hamandoana amin'ny metatra toratelo amin'ny fakan-tsary.
Hatramin'ny namokarana ny varimbazaha tamin'ny 2010 dia hita fa firoboroboan'ny fitomboana: nitombo 17% ny velaran'ny vokatra, nitombo 25% ny vokatra, ary 52% ny vokatra rehetra. Tamin'ny 1 Janoary 2012 dia nanana siliona 258 i Kazakhstan izay manana fitehirizana 14 771.3 taonina sy elevator izay misy 14 127.8 taonina. Ny fampitomboana ny vokatra sy ny fiotazam-boaloboka dia mitaky fanatsarana ny teknolojia fanamainana mba hisorohana ny fahaverezan'ny vokatra sy hitazomana ny kalitaon'ny voam-bary.
Ny fomba fijery be indrindra amin'ny fanamainana ny voa sy ny fanesorana ny hamandoana dia ny fomba fanafanana fampidirana izay mijanona kely mianatra ary tsy dia ampiasaina amin'ny fampiharana noho ny tsy fahalavorariana be loatra amin'ny teknolojia famokarana mpanova hatetika. Na dia ny fitaovana fanorana fanalefahana ny famokarana dia mivoatra ankehitriny ary ny fampiasana ny fampiharana ny fanamainana voa dia lasa be kokoa raha oharina amin'ny fomba fanafanana nentim-paharazana (Zhidko, 1982).
Amin'izao fotoana izao, ny fanafanana induction dia ampiasaina amin'ny fanamafisana ny vokatra vy, amin'ny alàlan'ny fanamainana ho an'ny fahasimbana plastika (fametahana, fametahana, fanerena, sns.), Fanalefahana vy, fitsaboana hafanana (fampidirana an-tsokosoko, fanalefahana, fanamafisana, famonoana) , metaly. Ny fanamafisana induction tsy mivantana dia ampiasaina amin'ny fanamainana ny fitaovana teknolojia (fantsom-pifandraisana, fiara mifono vy, sns.), Fanafanana rano, fanamainana palitao sy fitaovana (oh: hazo). Ny masontsivana lehibe indrindra amin'ny fametrahana induction heatement dia ny matetika. Ho an'ny dingana tsirairay (mihamafy ny tany, amin'ny alàlan'ny fanamainana) dia misy elanelam-potoana avo lenta indrindra, manome ny fahombiazana ara-teknolojia sy ara-toekarena tsara indrindra. Ny hafanana manomboka amin'ny 50Hz ka hatramin'ny 5 MHz dia ampiasaina amin'ny fanafanana fampidirana.
Ny tombony amin'ny fanamainana induction dia misy ireto manaraka ireto:
Ny fandefasana angovo herinaratra mivantana amin'ny vatan'ny fanafanana dia mamela ny fampiharana fitaovana mafana mivantana, amin'izay ny tahan'ny fanafanana dia
Ny fandefasana angovo herinaratra mivantana amin'ny vatan'ny fanafanana dia tsy mila fitaovana fampifandraisana. Ilaina amin'ny tsipika mandeha ho azy ity
Rehefa diélectrique ny fitaovana fanamainana, ohatra ny voamaina, dia zaraina mitovy ny herinaratra mandritra ny habetsaky ny fitaovana fanafanana. Vokatr'izany, ity fomba fampidirana ity dia manome hafanana haingana
Ny fanafanana induction amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mety hampitombo ny famokarana sy hanatsara ny fepetra miasa. Ny fitaovana fampidirana dia azo raisina ho karazana mpanova, rehefa mifandray amin'ny loharano herinaratra AC ny rivotra mihodina voalohany (inductor) ary ny fitaovana fanamafisam-peo kosa no faharoa.
Ny fampihenana ny vidin'ny fametrahana manontolo dia mitaky fivoarana sy fampiharana tsotra amin'ny heaters induction design.
Ny tena maha samy hafa ny fanafanana induction avy amin'ny fomba nentim-paharazana ny fanamainana dia mitoetra amin'ny volumetric fanafanana. Ny hafanana dia miditra amin'ny vokatra (materialy) tsy avy any ambony; izy io dia niforona tamin'ny volony iray manontolo indray mandeha, ity dingana ity dia mamela ny fanamainana voa amin'ny fomba mahomby amin'ny fanjifana angovo ambany. Na ny fizarana hamandoana aza dia miseho amin'ny fitaovana maina mandritra ny fizotran'ny fampidirana fanafanana. Ny fampidirana dia tsy mihevitra ny famindrana hafanana avy amin'ny heater amin'ny fitaovana iray. Mandritra ny fampiasana fomba fanamainana hafa dia mila fanafanana ny rivotra, avy eo afindrao amin'ny hafanana ny hafanana avy amin'ny rivotra mafana. Isaky ny dingana - fanafanana ny rivotra, ny fitaterana azy ary ny famindrana ny hafanana amin'ny vokatra - tsy azo ihodivirana ny fahavoazan'ny hafanana.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa any Kazakhstan dia saika tsy mampiasa heaters induction satria lafo be. Modely jiro taloha an'ny milina fanamafisana induction lany andro ary tsy foronina.
Fanamainana ny varimbazaha amin'ny alàlan'ny fanamainana induction. Fanamainana amin'ny sosona latsaka
Manoro hevitra izahay ny fomba fanamorana fampidinana ny fanamainana voa (sary 1) izay andehanan'ny voam-bary, entin'ny herin'ny hery misintona, amin'ny alàlan'ny hazo maina. Eo an-tampon'ny voamadinika fanamainana dia entin'ny mpampita vazy na fitaovana fitaterana hafa; avy eo miditra amin'ny tilikambo maina ilay voa. Ao amin'ny fakantsary fanamainana tilikambo, ny inductor, mifandraika amin'ny mpanova matetika, dia mamorona saha elektromagnetika (flux) avo matetika.
Fanamainana amin'ny sosona mihintsana. Ny sosona latsaka dia maneho riaka varimbazaha mihetsiketsika be loatra, ampitahaina amin'ny fisondrotan'ny gazy (frein aerodynamika). Ny tena fitambaran'ny voam-bary dia mitombo mandritra ny hetsika. Fanamainana amin'ny sosona mihantona. Ny fihenan'ny voamaina mihantona dia tratra amin'ny fiakaran'ny riaky ny entona rehefa mitombo ny hafainganan'ny famatsiana herinaratra. Mandritra izany fotoana izany, ny voam-bary iray manontolo dia misy ifandraisany amin'ny fifanakalozana hafanana sy hamandoana amin'ny entona. Ny fotoana fijanonan'ny voa ao amin'ny fantsom-pneumo dia tsy mihoatra ny segondra vitsy; ny mari-panaon'ny mpandraharaha maina dia 350-400 ° C. Na izany aza, ny fihenan'ny hamandoana dia mitentina ampahan'ny isan-jato. Noho izany, ny fitaovana misy sosona voa mavesatra dia tsy ampiasaina ho toy ny fanamainana misaraka, fa toy ny singa iray an'ny fanamainana mitambatra ao amin'ny efitrano maromaro.
Amin'izao fotoana izao ny firoboroboan'ny orinasa fambolena sy ny ascenseur dia ataon'ny mpanamaina zotra mivantana. Ireo fanamainana ireo dia manome soso-kevitra momba ny tsy fitoviana amin'ny fanamainana sy ny fanamainana ny voam-bary, izay mahatonga ny vidin'ny fanamainana mafana be. Ny antony lehibe indrindra eto dia ny tsy fahalavorariana amin'ny famatsiana ny mason-drivotra maina sy rivotra iainana amin'ireo sosona voa maina.
Ny fepetra tena ilaina amin'ny asa kalitaon'ny fanamainana voa dia ny fampangatsiahana tsara ny voamaina maina. Araka ny drafitra, ny fitaovana mangatsiaka ataon'ny mpanamaina voa dia natao mba tsy hihoatra ny hafanan'ny rivotra iainana mihoatra ny 10 ° C ny mari-pana amin'ny voany. Na izany aza, amin'ny fampiharana io sanda io dia mahatratra mihoatra ny 12 ° C rehefa ambony kokoa noho ny 15 ° C ny mari-pana amin'ny rivotra. Ny fanamainana voa maoderina koa dia manome tsy fitoviana lehibe amin'ny famafana ny sosona voa tsirairay. Ao amin'ny tontolon-kevitra voaresaka momba ny fampiharana ny fanamainana fanamainana induction dia mety ho fomba mety kokoa amin'ny resaka vokatra, kalitao ary fahombiazan'ny vidiny.
Baum, A., 1983. Fanamainana ny grain [amin'ny teny Rosiana], Mosko: Kolos
Ginzburg, A., 1973. Ilaina amin'ny teôria sy ny teknolojia amin'ny fanamainana ny sakafo [amin'ny teny Rosiana], Moskoa: Indostrian'ny sakafo
Zhidko, V., 1982. Ny fanamainana sy ny fanamainana voa [amin'ny teny Rosiana], Mosko: Kolos
Sokajy Technologies Tags Mividiana heaterina fanamainana induction, Voamaina maina, Fampidirana Grain fanamainana, Vary fampidirana maina, Fanamainana induction, Vary fanamainana fampidirana, Fanamainana varimbazaha fampidinana, Ny vidin'ny fanamainana varimbazaha fampidinana, Masinina voa fanamainana induction, Rafitra fanamainana induction, Fanamainana fanamainana induction Post Fikarohana